आउँदा आउँदै फुटबल कोचको रवाफिलो शैलीः थ्रि नेसन्स कपमा नेपालले गतिलो खेलेको थिएन ! -
आउँदा आउँदै फुटबल कोचको रवाफिलो शैलीः थ्रि नेसन्स कपमा नेपालले गतिलो खेलेको थिएन !
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् अब्दुल्लाह अलमुताइरी । आज एन्फाले उनलाई पत्रकारसँग चिनायो । पहिलो झलकमै उनको फरक स्वभावबारे पत्रकारले भेउ पाए ।
सामान्यतया विदेशी कोचहरु नेपाल आउँदा नेपाली खेलाडी र टिमको प्रशंसाबाट सुरु गर्छन् । उनीहरुमा धेरै सम्भावना रहेको र आफूले त्यसलाई निखार्ने योजना सुनाउँछन् । अब्दुल्लाह भने फरक अन्दाजमा पेश भए । मसिनो स्वरमा उनले कडा–कडा कुराहरु राखे । उनी आफ्नो रणनीतिमा स्पष्ट देखिए, तर अतिरिक्त रवाफ पनि देखाए । उनले बारम्बार नेपालले अब सुन्दर फुटबल खेल्नेमा जोड दिएका थिए ।
अब्दुल्लाहले हालै सम्पन्न भएको थ्रि नेसन्स कपको विश्लेषणबाट सम्वोधन सुरु गरे । फाइनलमा बंगलादेशलाई पराजित गरेपछि नेपाली टिमको हाइहाइ भइरहेको छ । तर, प्रशिक्षकले यो त्यति धेरै सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने जित नभएको भाव प्रकट गरे ।
उनले भने, ‘सारा नपालीले रातभरी खुशी मनाएको मैले हेरिरहेको थिएँ । तर मलाई लाग्छ हामीले सेलिब्रेसन त्यतिबेला गर्नुपर्छ जब एसिया कपका लागि क्वालिफाइ हुन्छौं । वा साग च्याम्पियनसीप जित्छौं ।’
प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले सो खेलमा नेपाली टिमको प्रदर्शनलाई पनि गतिलो ठहर्याएनन् ।
उनले भने, ‘अहिले मैले त्यो खेलको विषयमा सोधेँ भने तपाईंहरु सबैले खुशी नै व्यक्त गर्नुहुन्छ होला । तर, म खुशी छैन । नेपालले ४९ मिनेट मात्रै प्रोफेसनल फुटबल खेलेको थियो । बाँकी फुटबल नै थिएन । हामीले हरेक म्याचमा ६० मिनेटभन्दा बढी प्रोफेसनल फुटबल खेल्नुपर्छ । हामीले सुन्दर फुटबल खेल्नुपर्छ ।’
तपाईं नेपाली फुटबल समर्थकहरुसँग के प्रतिवद्धता गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पनि प्रशिक्षकको रवाफिलो जवाफ आयो ।
‘म अरु केही प्रोमिस गर्दिन । केवल एउटा प्रोमिस गर्छु । सबैजना नेपालीले आफ्नो टिममा गर्व गर्नुहुनेछ । सबैले यी लडाकुमाथि गर्व गर्नुहुने छ । नेपाल राष्ट्रको लागि खेलाडीहरुले लड्नेछन् ।’
अब्दुल्लाहले नेपाली फुटबलमा शान्तिपूर्ण माहोल हुनुपर्ने बताए । मिडियालाई पनि उनले खेलाडीको आलोचनामा नलेख्न घुमाउरो चेतावनी दिए ।
‘टिमका विषयमा मिडियामा नकारात्मक कुरा होस भन्ने म चाहन्न । यसमा तपाईंहरुले पनि ध्यान दिनुहुनेछ । खेल हार्यौं भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार मलाई ठहर्याउनुस् । टिमले जित्यो भने सबै जस खेलाडीलाई दिनुस्, मलाई बिर्सिए पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
पत्रकारले सोधे, ‘तपाईं नेपाली टिमलाई कुन शैलीमा मैदानमा उतार्न चाहनुहुन्छ ?’
प्रशिक्षकको स्ट्रेटफरवार्ड जवाफ आयो ।
उनले भने, ‘मैले निर्णय लिइसकेँ, हामी ४–३–३ मा खेल्नेछौं । हामी डिफेन्स गर्दैनौं । न हामी पूरै ९० मिनेट अट्याक गछौं न डिफेन्स गछौं । हामी केवल सुन्दर फुटबल खेल्नेछौ ।’
आफ्नो मूल्यांकनका लागि मिडियाले आफूलाई समय दिनुपर्ने उनले माग गरे ।
‘मलाई तुरुन्तै जज नगर्नुस् । विश्वकप छनोटका खेलमा मैले टिममा धेरै परिवर्तन गर्न भ्याउँदिन । यो टिमलाई उच्चस्तरको बनाउन मलाई समय चाहिन्छ,’ उनले भने । कति समय भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
साफ च्याम्पियनसीप नेपालले जित्ने सम्भावनाका बारेमा उनले धेरै उत्साही कुरा गरेनन् । उनले यसका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने जवाफ दिए । साफ च्याम्पियनसीप खेल्ने सबै देशहरु लगभग एउटै रहेको उनले औंल्याए ।
‘नेपाली जनता साफ कप जितेर खुशी हुनका लागि हकदार छन् । तर, हामीले यसका लागि फाइट गर्नुपर्छ । समुह चरणबाट फाइनलसम्म स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्छ । सार्कमा सबै टिमहरुको स्तर उही छ । त्यसैले जसले पनि जित्न सक्छ । म हामी जित्छौं भन्दिनँ, तर सक्दो प्रयास म गर्छु ।’